Mootummaan Keeniyaa, Mooraalee Baqattootaa Guguddoo Biyya Isaa Keessa Jiran Lama Cufuuf Karoorfate
Caamsaa 06, 2016
Faayilii - Mooraa baqattootaa Dadaabii, Keeniyaa, 2011
Cufamuun mooraalee baqattootaa lameen, Dadaabii fi Kaakumaa jedhamanii, baqattoota kuma dhibba afur ta’an irratti akka dhiibbaa qabaatu dubbatamaa jira. Sababaa rakkoo nageenyaa biyyattiif jecha akka mooraalee kana cufuuf karoorfate – ibsa har’a baaseen ka beeksise – Mootummaan Keeniyaa, biyyi isaanii baqattoota keessummeessuun ka gara xumuraatti dhufaa jiru ta’uu dubbata.
Mooraa baqattootaa Dadaabii
Ministara Dhimma baqattootaa biyyattii cufuu isaa fi mooraalee baqattotaa lameen cufuuf kan irratti hojjetaa jiru ta’uu ifatti beeksise – ibsi Har’a Mootummaan Keeniyaa baase kun. Kan walakkeessa Keeniyaatti argamuu fi addunyaa irratti mooraa baqattootaa isa guddaa tahe – mooraa Dadaab keessa – yeroo ammaa, kanneen irra-jiriin isaanii lammiwwan Somaaliyaa tahan – baqattoota gara kuma dhibba sadi’ii fi kuma soddomaa tu jiraata. Ka Keeniyaa Kaaba Lixaatti argamu – mooraa Kaakumaa keessa immoo baqattoota kuma shantamii shan tu qubatee jira.
Walumaa-galatti Keeniyaan, baqattoota gara kuma dhibba jahaa tahan keessumsiisaa jirti. Kanneen keessaa afur keessaa harki sadii Somaaliyaa irraa achi baqatan. Kanneen hafan keessaa irra-jireessi immoo Sudaan Kibbaa irraa achi cehan.
Baqattummaan Afriikaa keessaa amma iyyuu hammateera. Mootummannis fala barbaaduuf walii galtee agarsiisuu qabu
Dhimmi Baqattoota Oromoo Torban Dhufu Mana Murtii Keniyaatti Ilaalamuuf jira.
Keeniyaan Buufata Baqattootaa Cufuuf Murteessuun Isaa Jireenya Keenya Egeriif Nu Yaadddessaa Jira Jedhu Baqattoonni Oromoo
Bidiruu seer-malee baqattoota Itiyoophiyaa 80 oli fa’atee deemu Somaalee gama Kaabaatti qabamee, reeffa nama 7 achi keessatti argan
Taanzaaniyaan Lammilee Itiyoophiyaa seeraan ala biyyattii qaxxaamuraa turan to’annoo jala oolchite.
Manni Murtiin Keeniyaa Barattoonni Oromoo Seeraan Ala Biyyatti Seenan Akka Itiyoophiyaatti Deebi’an Murteesse
Dhaabi gargaarsaa kutaa kaalifoorniyaa Lammiiwwan Oromoon bu’uurfame baqattootaa gargaaraa jira
Godaantoti Itiyoophiyaa Harka Taanzaaniyaa Seenan
Rakkooleen Baqattoota Awurooppaa Jeequmsatti Jijjiiramuu Akka Danda’u Mootumman Gamtoomanii Akeekkachiise
Dararamuu Baqatoota Afrikaa Kan Yaman Keessaa Mootummaan Beeka
Rakkoo Godaantootaa fi Baqatootaa